Hurumende yoKurudzirwa Kurapa Zvirwere zveGomarara Pachena
Mimwe yemichina inoshandiswa mukurapwa kwechirwere chegomarara.
Veruzhinji vari kuchema-chema kuti dai hurumende yaita kuti chirwere chegomarara chirapwe pasina muripo, uye kuti kuzvipatara zvese kusanganisira zvekumaruwa kuiswe michina inoongorora magomarara akasiyana-siyana.
Apo nyika iri pakati pekuchema vaive mutungamiriri webato reMovement for Democratic Change, VaMorgan Tsvangirai, avo vakafawo nechirwere chegomarara, veruzhinji vanoti hurumende ikasakoshesa chirwere ichi sezvakaitwa chirwere cheHIV/ AIDS, vanhu vakawanda vacharasikirwa nehupenyu.
Amai Thandaza Mhlanga vaudza Studio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ione kuti zvipatara nemakirinika zvarapa chirwere chegomarara pachena sezvo chopedza vanhu vakawanda.
Izvi zvatsigirwawo naMuzvare Fortune Moyo avo vawedzerawo vakati pamusoro pekurapwa pachena hurumende inofanirwa kuita dzidziso dzakasimba zvakanyanya kuti veruzhinji vazive nezvechirwere chegomarara. Muzvare Moyo vati zvinosuwisa kuti nguva zhinji vanhu vanobatwa chirwere ichi chakomba.
Muzvare Petronella Furusa vakurudzirawo kuti hurumende itsvage mari yakangonangana nekurwisa chirwere chegomarara.
Vati kuchengetedza hutano hweveruzhinji hurumende inofanirwa kutora matanho yowona kuti kuzvipatara zvese kusanganisira kumamisha zvawaniswa michina nemishonga inoongorora gomarara kuti veruzhinji vapote vachitariswa.
Munguva shoma yapfuura, sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende, Amai Ruth Labode vakaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende iite dzidziso nezvechirwere chegomarara sezvakaitwa kuneHIV/AIDS. Amai Labode vakati zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti chirwere chegomarara chikakurumidza kubatwa chinorapika.
Cancer Registry inoti huwandu hwevanhu vari kubatwa negomarara huri kuramba huchikwira. Chirwere chegomarara ichi chinoda mari yakawanda kuti munhu arapwe, uye veruzhinji vanoti havaikwanisi kuwana mari dzinodiwa idzi.